Faah-Faahinta Waxkasta Oo Aad Uga Baahan Tahay Abaalmarinta FIFA The Best Ee Caawa La Bixinayo - GOOL24.NET
Faah-Faahinta Waxkasta Oo Aad Uga Baahan Tahay Abaalmarinta FIFA The Best Ee Caawa La Bixinayo
January 17, 2022 Apdihakem Omer Adam
Abaalmarinta ay bixiso hay’ada ugu sarreysa kubadda cagta ee FIFA The Best ayaa caawa markii lixaad taariikhda lagu bixin doonaa dalka Switzerland, abaalmarinta ayaa la guddoonsiin doonaa ciyaaryahankii ugu fiicnaa sanadkii tagay ee 2021.
Iyadoo aysan abaalmarinta Ballon d’Or qabsoomin sanadkii 2020 ayaa la bixiyay FIFA The Best oo qaab fogaan-arag ah lagu qabtay, abaalmarinaha la bixinayay ayay ku jiraan ciyaaryahanka ugu fiican guud ahaan, goolhayaha ugu fiican iyo tababaraha ugu fiican rag iyo dumarba.
Sanadkii 2020 ayuu ku guuleystay abaalmarinta weeraryahanka Bayern Munich ee Robert Lewandowski oo ka qaaday Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo, doorkan ayay tartami doonaan Lewandowski, Messi iyo Mohamed Salah oo isagu Liverpool ka socda.
Lionel Messi ayaa sanadkan ku guuleystay abaalmarinta Ballon d’Or markiisii toddobaad taariikhda kaddib markii uu dalkiisa Argentina la qaaday Copa America, Messi ayaa markale ah midka ugu cad-cad loolanka FIFA The Best.
Messi ayaan ahayn midka kaliya ee sida tooska ah loogu saadaalin karo abaalmarinta caawa maadaama oo uu Lewandowski ku jiro qaab ciyaareedkii ugu fiicnaa waayihiisa ciyaareed, dhaliyaha Polish-ka ah ayaa tiro rekoodho aad u badan ah ku jabiyay Bayern Munich waxaana macquul ah inuu kaga guuleysto Leo.
Mohamed Salah ayaa sidoo kale loo magacaabay saddexda sarre iyadoo Cristiano Ronaldo, Erling Haaland iyo Karim Benzema ay seegeen.
Dhinaca tababarayaasha ayay macalinka sanadka ee xaga ragga ku loolami doonaan tababaraha Chelsea ee Thomas Tuchel, Pep Guardiola oo Man City ah iyo Roberto Mancini oo xulka Talyaaniga ah.
Kooxda gabdhaha ee Barcelona ayaa xilli ciyaareedkii hore kooto ku qabsatay kubadda cagta dumarka waxaana abaalmarinta The Best ugu wada tartamaya Jenni Hermoso iyo Alexia Putellas halka jagada tababarenimo uu ugu cad cad yahay tababarahooda Lluis Cortes.
Wakhtiga laga daawan doono bixinta FIFA The Best ayaa xilli geeska Africa ku beegan 9-ka habeenimo.